Imisa kulan ayey u baahan tahay inay adkaato Liverpool si ay ugu guuleysato Premier League 30 sano kaddib? – Gool FM
Imisa kulan ayey u baahan tahay inay adkaato Liverpool si ay ugu guuleysato Premier League 30 sano kaddib?
(Liverpool) 30 Jan 2020. Tababaraha kooxda kubadda cagta Liverpool ee Jürgen Klopp ayaa markale ka hadlay go’aankiisa kaga aadan hanashada horyaalka Premier League, wuxuuna sheegay in aan wali la go’aamin Karin, inkastoo ay kooxda ku soo xigta ee Manchester City ka sarreeyaan 19 dhibcood oo nadiif ah.
Kooxda Liverpool ayaa xalay guul 0-2 ah kaga gaartay naadiga West Ham United kulankoodii baaqiga u ahaa ee horyaalka Premier League, iyadoo ay labada gool u kala dhaliyeen xiddigaha Maxamed Saalax iyo Alex Oxlade-Chamberlain.
Wargeyska “Mirror” ayaa wuxuu daabacay wareysi uu bixiyay Tababare Jürgen Klopp kaddib guushii ay xalay ka gaareen kooxda West Ham United kaasoo uu kaga hadlay rikoorrada ay jabineyso kooxdiisa Liverpool xilli ciyaareedkan.
Haddaba Jürgen Klopp oo ka hadlayay guulaha kooxdiisa Liverpool ayaa wuxuu yiri:
“Waxba kama ogi arrimahan, tani kuma xirna dareenkayga qanacsanaanta ah, dareenkeyga wuxuu ahaa inaan si buuxda diirada u saarro kulankan”.
“Waxaan doonayay inaan guul gaarno, waxayna dhalinyarada ku guuleysteen inay taasi sameeyaan”.
Si kastaba ha noqotee kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa 14-ka kulan ee kaga harsan Premier League xilli ciyaareedkan waxay kaga baahan tahay 24 dhibcood kaliya, si ay ugu guuleysato koobka horyaalka, taasoo la micna ah inay u baahan tahay 8 guul, taasoo siin doonta taageerayaasha Reds horyaalkoodii ugu horreeyay tan iyo 1990.
Kooxda Liverpool oo xalay sameysay rikoor Taariikhdeeda ah muddo 127-sano ah & Goolhaye Alisson Becker oo isaguna noqday...
Kaddib goolkii uu xalay ka dhaliyey Kooxda West Ham, Mohamed Salah oo ka sare maray Fernando Torres